Muuqaalka Kaamirada 'IPad Pro' ee 'Stage Center' wuxuu taageeri doonaa Barnaamijyada Qaybta Saddexaad | Waxaan ka socdaa mac
Muuqaalka kamaradaha 'IPad Pro' ee 'Center Stage' ayaa taageeri doona barnaamijyada dhinac saddexaad
Abriil 20 iyo Apple waxay ku soo bandhigeen bulshada dhacdadii gu'ga, iPad-ka cusub. Dabcan tikniyoolajiyadda soo baxda iyo gaar ahaan qalabka 'M1 chip' waxaan ku sameyn karnaa waxyaabo yaab leh. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira muuqaal cusub oo soo jiitay dareen badan: Marxaladda Xarunta. Kamarad u muuqata inay leedahay nolol u gaar ah oo aan ognahay inay taageeri doonto barnaamijyada dhinac saddexaad.
Moodooyinka M1 iPad Pro dhawaan ay shaacisay Apple muuqaal cusub oo wicitaan fiidiyoow ah oo lagu magacaabo Center Stage, kaas oo isticmaal barashada mashiinka inaad si otomaatig ah u xajiso oo aad u dhaweyso kamaradda hore si aad udhigto udub-dhexaadka markaad dhaqaaqayso. Khayaali saynis u gaar ah oo aad waxtar ugu leh waqtiyadan kulammada dalwaddu ay sii kordhayaan muhiimadda ugu dhowna ay qasab yihiin.
Marxaladda Xarunta waxaa laga heli karaa labadaba 11-inji iPad Pro sida 12,9-inji mahadsanidiin Chipset-ka cusub iyo nidaamka kamaradaha TrueDepth oo la hagaajiyay, oo ay kujiraan kamarad hore oo aad u ballaaran oo 12MP lehna 120 ° aragti, marka loo eego heerka. C7 MP kamarad-xagal-ballaadhan oo ku saabsan moodelladii jiilkii hore ayaan suurtogal ka dhigayn Marxaladda Xarunta waxay ku dhacdaa iPad-yada gaboobay. IP-ga cusub ee 11-inji ah wuxuu bilaabanayaa 879 12.9, halka iPad-ka cusub ee 1.199-inji ah uu ka bilaabmayo € XNUMX. Amarada hore waxay bilaabmayaan Abriil 30 iyo helitaanku wuxuu bilaabmayaa qeybta labaad ee Maajo.
Wax yar ayaa hadhay si loogu raaxaysto waayo-aragnimadan wicitaanka cusub ee FaceTime iyo barnaamijyada kale ee saddexaad waxaan rajeyneynaa in tartiib tartiib ay u midoobi doonaan. Waxaan sugi doonaa inaan ku aragno kamaradan cusub ficil ahaan oo runtii naga yaabin doonta wanaag. Dhanka kale, kaliya ayaa harsan in la tiriyo maalmaha illaa inta iibku furmayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Muuqaalka kamaradaha 'IPad Pro' ee 'Center Stage' ayaa taageeri doona barnaamijyada dhinac saddexaad
"MagSafe" wuxuu ku soo laabanayaa Mac. Xaaladdan oo kale iMac
Tani waa sida Apple u soo bandhigtay AirTags cusub